Fitaovana tsy tapaka sy tsy misy mari-pamantarana, fantsom-barotra, metisy, fitaovana Hydraulique, pex pipo, fitaovana fiasana Hardware Cixi Wenap International Trading Co., Ltd dia iray amin'ireo mpamatsy sy mpanamboatra.
Manana rojom-barotra famokarana feno.
Nanangana tambajotra fivarotana lehibe izahay.
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa.
Mandrakotra mihoatra ny 20 sy ny faritra eto amin'izao tontolo izao
Famolavolana sy famokarana mifanaraka amin'ny fepetra takiana aminao.
5 taona mahery niainan'ny manam-pahaizana manokana
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao eto amin'ny aterineto, fa manana traikefa efa za-draharaha efa ho 5 taona. Ny orinasanay dia ao amin'ny tanàna tsara tarehy Cixi, akaikin'ny seranana malaza Hangzhou, any amin'ny faritra midadasika "golden triangle" centrum de Shanghai-Hangzhou-Ningbo. Ny toerana misy ny orinasanay dia akaiky ny lakandranon'i Ningbo (seranan-tsambon'i Beilun), tsy lavitra ny seranan'i Ningbo. Manana fitaterana mora isika amin'ny toerana ara-jeografika.